IiGlavu zeGloves yokuzilungisa Abavelisi kunye nabaXhasi | China Ukuzilungisa iiglavu zeMitts Factory
Ukuzilolonga kweGlove yesilwanyana
Iminwe yethu emihlanu yokulungisa iiglavu ayincedi kuphela ekunciphiseni iinwele eziphaphazelayo emoyeni, ikwanyusa neeoyile zolusu kwaye iphucula ukuthamba kwengubo yezilwanyana zasekhaya kunye nokuqaqamba.
2.Iingcebiso ezithambileyo zale minwe mihlanu yokulungisa izilwanyana zasekhaya ngokulula, i-nubs yobude obulungileyo yenza iinwele kube lula ukuzikhupha nokuzilahla.
3. Ukongeza, nokuba unesihlahla esincinci okanye esikhulu, le glavu yokuzilungisa yenziwa ukuba ilingane. Umtya osemgangathweni wenza ukuba ubulungele ngokugqibeleleyo bonke ubungakanani besihlahla.
Igqibelele ukuba izinja ezineenwele ezinde okanye ezimfutshane nezinoboya obugobileyo kunye nokususa iinwele.
Ukususwa kweNwele yeGusha
2.Izinto ezenziwa yile glavu yokususa iinwele ziguquguqukayo kwaye ziyaphefumla, umtya wesandla ohlengahlengayo uhambelana nabanini bezilwanyana.
Icala le-velor le-3.Glove linciphise ngokufanelekileyo inani leenwele ezishiyeke kwifenitshala, iimpahla okanye emotweni.
4.Iiglavu zokususa iinwele zasekhaya zisusa ukungcola, idander kunye neenwele ezikhululekileyo kwikati, inja, ihashe okanye esinye isilwanyana.
Isiglavu sokuthambisa izilwanyana zasekhaya
Izilwanyana zasekhaya zifuna ukuzilungisa rhoqo ukugcina iidyasi zikwimo ephezulu. Ukuzilungisa ngokungakhathali kususa iinwele ezifileyo nezikhululekileyo. Isigulisi sokucoca izilwanyana zasekhaya sipolisha kwaye sihombise idyasi, sisuse iitangs kunye nokukhuthaza iifollic zeenwele, ukukhuthaza impilo kunye nokuzala kwakhona.
Ukucoca isikhuseli sezilwanyana zasekhaya
Enye yeyona ndlela ilula kunye neyonwabisayo yokulungisa izilwanyana zakho. Iglavu yokuchitha izinja isilwanyana silungisa iitangile ezimbi kunye neemethi ngelixa siphakamisa ubumdaka kunye nedander kwidyasi.
2.Ibhanti ehlengahlengiswayo igcina isikhuseli sikhuselekile kwisandla sakho ngelixa uzilungisa.
Uyilo lwezikhonkwane zentloko ezijikeleziweyo lusengqiqweni, olunokuhlamba izilwanyana zasekhaya ngelixa zinomsebenzi wokuphulula.
4.Iiglavu zokuphalaza izinja zigcina zisempilweni kwaye zicocekile ngokubonelela ngezidingo zazo zemihla ngemihla.
Ukuhlanjwa kweglavu yenja
Izinto zerabha zendalo kwindawo yokuhlamba inja isusa iiglavu zisuse iinwele ezikhululekileyo kunye nokuthambisa ulusu,
Ilaphu le-Eco lisula ukucoca ubumdaka obujikeleze iinyawo nobuso.
Umtya oguqulwayo uhambelana nazo zonke iimilo zesandla kunye nobukhulu.
Iglavu yokuchitha inja ihlala ixesha elide kwaye ihlala ixesha elide kwaye inokuhlanjwa ngomatshini.